Dib u eegista Eve cam: asturnaanta, tayada muuqaalka iyo astaamaha amniga ee horumarsan | Wararka IPhone
HomeKit Secure Video wuxuu na siiyaa a nidaamka ogeysiiska caqliga leh iyo nidaamka wax lagu qoro oo leh asturnaanta ugu badan suurto gal, iyo kambiyuutarka cusub ee habeenku wuxuu uga faa'iideysanayaa astaamahan cusub sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan.
1 Naqshadeynta iyo tilmaamaha
Naqshadeynta iyo tilmaamaha
Qalabka soo saaraha walxaha ayaa maalintiisii ​​ugu horreysay ka dhigaya qaybta kaamirooyinka amniga, waxayna ku sameyneysaa shey si qurux badan oo caqli badan leh, dhammeystir wanaagsan iyo ka faa'iideysiga wax walba oo ay HomeKit Secure Video na siiso. Naqshad wareegsan oo aan qarinayn inay tahay kamarad, matte madow oo ka samaysan caag. Waxay leedahay cag fiiqan oo ay weheliso suurtagalnimada wareejinta kaameradda 360º ayaa kuu oggolaan doonta inaad qaadato meel kasta oo aad kula jaanqaadi karto meesha aad dhigayso oo aad ku yeelan karto aragtida ballaadhan ee ugu ballaaran. Tan waxaa sidoo kale caawiyay xagasha daawashada 150º ee kuu oggolaaneysa inaad xakameyso gees walba oo qolka ah.
Dhinaca hore waxaan ka helaynaa muraayadaha muraayadaha, aaladda dareeraha dhaqdhaqaaqa infrared, iyo Laydh tilmaamaya xaaladda kamaradda. Dhinaca dambe ee badhanka dib u dajinta iyo ku hadla oo kuu oggolaanaya isgaarsiinta labada dhinac, inaad awoodo inaad maqasho waxa ka dhacaya dhinaca kale ee kamaradda mahadnaqa makarafoonkeeda, waadna hadli kartaa si laguu maqlo. Saldhigga laba jibbaaran waa magnet, markaa waad ku dhejin kartaa dusha sare ee bir kasta, ama isticmaal dhexda dhexda birta ah.
Xallinta sare FHD 1080p duubista, xagalka daawashada darajada 150, aragtida habeenka, dareeraha dhaqdhaqaaqa infrared, isgaarsiinta laba-geesoodka ah ee makarafoonka iyo sameecadda ku dhex jirta, 2,4 iyo 5GHz WiFi isku xirnaanta, isku xira microUSB iyo 2,2 USB illaa microUSB cable Meter iyo adabtarada fiilooyin leh isku xirayaasha fiilooyinka ee Yurub, Boqortooyada Midowday, Mareykanka iyo Australia ayaa ah qeexitaannada dhameystiran ee kamaraddan gudaha. Kuwani waa qeexitaanno caadi ah oo loogu talagalay kamarad kasta oo amniga ah, oo lagu dhammaystiro Taageerada Muuqaalka ah ee 'HomeKit Secure Video'.
Isku waafaqsanaanta kamaradan la socota barnaamijka otomaatiga guriga ee Apple, HomeKit, kuma koobna oo kaliya fudaydka qaabeynta oo kaliya kaaga baahan inaad iskaan ku sameysid lambar QR saldhigeeda, laakiin dhammaan astaamaha cusub ee Apple ku daray HomeKit Secure Video, aaway asturnaanta, nidaam caqli badan oo ku kala duwan ogeysiisyada iyo duubista ku saleysan goobtaada, iyo aqoonsiga wejiga Waxay ku dhejiyaan heerka kamaradaha ugu horumarsan, oo intaas oo dhanna waxay adeegsanayaan oo keliya koontadaada iCloud.
Muhiim ma ahan in keyd dheeraad ah qandaraas lagu siiyo si loo awoodo in la isticmaalo kamaraddan, laakiin in si buuxda looga faa'iideysto wax kasta oo ay sameyn karto. Haddii aynaan haysan keyd dheeri ah, waxaan si toos ah u arki karnaa fiidiyowyada, waxaanan heli doonnaa ogeysiisyo leh dhaqdhaqaaq kasta oo ay kamaraddu ogaato, laakiin ma jiri doono kaydinta fiidiyowyada ee iCloud, mana suurtagal noqon doonto in la kala saaro dadka, xayawaanka ama gawaarida ogeysiisyadan. Waxaas oo dhan iyo sidoo kale inaad yeelato aqoonsi weji, waxaad u baahan tahay koonto leh 200GB oo keyd ah (hal kamarad) ama 2TB (illaa shan kamaradood). Iyadoo la tixgelinayo waxa adeegyadan ay ku kacayaan kamaradaha kale iyo in iCloud ay sidoo kale u adeegto waxyaabo kale oo badan, € 9,99 bishiiba ee 2TB ee iCloud waxay u muuqataa xitaa mid jaban.
Ogeysiisyada caqliga badan ayaa kuu oggolaanaya inaad heshid digniinta dhab ahaan adiga khuseysa. Marka hore waad qeexi kartaa nooca ogeysiisyada aad rabto inaad hesho (isbeddelada xaaladda, luminta xiriirka, dhaqdhaqaaqa ...), laakiin sidoo kale codsiga Guriga ayaa kuu oggolaanaya inaad qeexdo Waqtiga aad rabto ogeysiisyadaan, oo xitaa waad qeexi kartaa iyadoo kuxiran inaad guriga joogtid iyo inkale. Waxa kale oo aad dejin kartaa ogeysiisyada kaliya marka fiidiyow la duubo, taas oo bixisa xaddidaad weyn maxaa yeelay waxaad dooran kartaa inaad duubo fiidiyowyada oo keliya marka dadka, xayawaanka iyo gawaarida la ogaado. Haddii kaamiradu diirada saareyso meel gawaarida baabuurtu ku badan yihiin, curyaaminta gawaarida ayaa kaa caawin doonta yareynta ogeysiisyada beenta ah.
Fursadaha duubista sidoo kale waa la qaabeyn karaa, ma aha oo kaliya marka la eego sheyga la ogaado, laakiin sidoo kale waxay kuxirantahay haddii aad guriga joogto. J) Haa, kaamiradu si toos ah ayey iskaga beddeli kartaa hal gobol illaa gobol kale markaad guriga ka baxaysid iyo markaad timaaddoba. Ma ka daashay kaamerada barxadda guriga oo ku siinaysa waxyaabo been abuur ah markaad guriga joogto? Hagaag, barkinta markii aad guriga joogtid oo si toos ah u dhaqaajiso markaad baxdo. Heerarka kamaraddu waxay noqon karaan:
Gebi ahaanba waa ladilay
Soo ogow dhaqdhaqaaqa: kaliya wuxuu u shaqeeyaa sida dareeraha dhaqdhaqaaqa
Gudbinta: kaliya waxay u oggolaaneysaa daawashada tooska ah, oo lagu daray dareeraha dhaqdhaqaaqa
Gudbinta iyo duubista: dhamaan inta kore, kudar duubista waxqabadka la ogaaday.
Waxaas oo dhan waa in lagu daraa suurtagalnimada qeexidda aagagga waxqabadka. Casa wuxuu na siinayaa xorriyad buuxda shaqadan, isagoo awood u leh inaanu aasaasno aagga waxqabadka ee aan dooneyno, kuma koobna nafsadeena aag leydi ah sida ku dhacda kaamirooyinka qaar. Xitaa waan qeexi karnaa dhowr aag haddii aan rabno. Sidan oo kale, kamaraddu waxay dhaafi doontaa wixii ka baxsan aagga la qeexay.
Natiijada ugu dambeysa ee dhammaan howlaha aan horey kuugu soo sheegay waa inaad leedahay kaamiro amni oo ku ogeysiinaysa marka aad rabto in lagu ogeysiiyo, beddelaadda xaaladda iyadoo kuxiran waqtiga ama goorta aad guriga joogto, in adeegsiga koontadaada iCloud ay ku kaydiso fiidiyowyada (iyada oo aan boos lagaa qaadin) si aad u daawan karto iyaga markasta oo aad rabto, oo intaas oo dhanna waxaa ku qabta nabadda maskaxda in fiidiyowyada ay looma dirin wax adeeg bixiye ah. Xitaa uma baahnid inaad isticmaasho barnaamijka habeenka (isku xirka) waxba maahan, illaa aad rabto inaad u isticmaasho bedel ahaan barnaamijka Home, taas oo aan la yaab lahayn sababtoo ah waa codsi weyn oo lagu xakameynayo qalab kasta oo HomeKit ah.
Ka dib markii la tijaabiyay kamarado badan oo fiidiyoow ah sanadihii la soo dhaafay, HomeKit Secure Video ayaa keenaya wixii aad ka codsatay adeegga noocan oo kale ah: asturnaanta, ogeysiisyada casriga ah ee ku saleysan goobta, iyo aqoonsiga wajiga. Haddii aan ku darno kamarad sida cambarka habeenkii, oo leh waxqabad sare, natiijadu waxay leedahay qol yar oo lagu hagaajiyo. Xaqiiqda ah in habeenki sidoo kale uusan laheyn adeegeeda ama uu ku weydiisto akoon diiwaangelin waa wax astaanta had iyo jeer laheyd horudhac, iyo nidaamka kormeerka fiidiyowga ee gurigaaga taas oo ah abaalmarin aan qiimo lahayn. Waxaad ka heli kartaa camarkii habeenka ahaa € 146 Amazon (isku xirka).
La jaanqaadi kara VideoKi aamin ah oo HomeKit ah
FullHD iyo aragti habeenkii
150º xagal daawasho
Weydiinta wax, xagal daawasho weyn
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Dib u eegista Eve cam: asturnaanta, tayada muuqaalka iyo astaamaha amniga ee horumarsan
Waan jeclahay kamaradan. Waxaan iibsaday maalmo ka hor, waxay umuuqataa wax fiican, laakiin si kasta oo aan u dejiyo, weligay kama maqnaan doono ogeysiiska mooshinka ee iPhone-ka. Way iga careysiisaa, waxaan haystay Xiaomi dhibaato la'aan, laakiin kan. Waxay diiwaangelineysaa wax walba, laakiin kama digeyso haddii aadan joogin guriga dhaqdhaqaaq kasta.
Jawaab David Fernández
Hubi dejinta ogeysiiskaaga. Waa inaad dhaqaajisaa "ogeysiisyada ku saabsan iPhone-kan" gudihiisa ku jira menu-kaha kamaradaha ee abka Guriga
Waad salaaman tihiin. marka waxaan u habeeyay digniintana igama boodayso.
Waa salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan si joogto ah toos ugala socon karo meel kasta ama haddii aan tago iCloud si aan u arko cajaladaha. Mahadsanid
Waxaad toos uga daawan kartaa meesha aad rabto
Adeegga Diiwaangelinta Macluumaadka Setapp Mac wuxuu ku fidaayaa macruufka